Microsoft Home Edition မှနေ Pro Edition သို့ upgrade လုပ်နည်း ~ The ICT.com.mm Blog
Microsoft Home Edition မှနေ Pro Edition သို့ upgrade လုပ်နည်း
အခုနောက်ပိုင်း လက်ပ်တော့ တွေတိုင်းနီးပါးမှာ Windows 10 License Home Edition တွေပါဝင်လာကြတာကြောင့်Windows 10 user တွေပိုမိုများပြားလာပါတယ်။ အဲ့ဒီအထဲကမှ လုပ်ငန်းပိုင်းဆိုင်ရာမှာအသုံးပြုသူတွေအနေနဲ့ Security ပိုင်းလည်းပိုမိုကောင်းမွန်ပြီးFeatures တွေပိုမိုစုံလင်တဲ့Windows 10 Pro ကိုပြောင်းလဲအသုံးပြုကြပါတယ်။ Windows 10 Home ကနေ Windows 10 Pro ကိုပြောင်းမယ်ဆိုရင် Microsoft Store ကနေ Visa Card/ Master Card တွေနဲ့တိုက်ရိုက်ဝယ်ပြီးပြောင်းလဲနိုင်သလို Windows 10 OEM License Key ကိုဝယ်ယူပြီး ပြောင်းလို့ရပါတယ်။
ဒါပေမယ့် Windows 10 OEM License Key ကိုသုံးပြီးပြောင်းတဲ့အခါမှာ အခွေမှာပါတဲ့ Product Key ကအလုပ်မလုပ်ဘူးဆိုတာတွေခနခနဖြစ်တတ်ပြီးWindows ကိုအစကနေပြန်တင်ရတာကြောင့် အထဲက Software, Data တွေကိုပျက်ကုန်တာတွေ၊ အချိန်ပိုကုန်တာတွေဖြစ်ရပါတယ်။
အက်ဒ်မင် ဒီနေ့မှာတော့ Windows 10 OEM License Key ကိုအသုံးပြုပြီး အလွယ်တကူနဲ့ မြန်မြန်ဆန်ဆန် Windows 10 Pro ပြောင်းနည်းကိုပြောပြပေးလိုက်ပါတယ် . . .
ပထမဆုံး Windows Key + E ကိုနှိပ်ပါ။ ပြီးရင် This Computer နေရာပေါ်လာပါက အပေါ်ဘက်မှာရှိတဲ့ Computer ကိုနှိပ်ပြီး ညာဘက်အလယ်က System Properties ကိုနှိပ်ပါ။ Boxကျလာပါကက အောက်ဘက်နားက Change product key or upgrade your edition of Windows ကိုနှိပ်ပါ။
Activation Tag ထဲရောက်သွားပါက change product Key ကိုနှိပ်ပါ။ Product Key တောင်းပါက default product key – VK7JG-NPHTM-C97JM-9MPGT-3V66T ကိုအရင်ထည့်ပါ။ ပြီးရင် Next ကိုနှိပ်ပါ။ ပြီးရင် စက်ကို Restartချပြီး အဆိုပါနည်းအတိုင်းနောက်တစ်ခေါက်ပြန်လုပ်ကာ Product Key ထည့်ရမယ့်နေရာရောက်ပါက ဝယ်ယူထားသော Windows 10 OEM Product Key ကိုထည့်ပါ။ Windowsကို Upgrade လုပ်လာရင်Start ကိုနှိပ်လိုက်ပါ။ ခနနေ Windows ကျသွားပြီးWindows ပြန်တက်လာသည်အထိစောင့်ပေးပါ။
အခုလိုလွယ်လွယ်ကူကူနဲ့ Windows 10 Pro ကိုပြောင်းနိုင်မယ့် Windows 10 OEM License Key တွေကို အိုင်စီတီ မှာအလွယ်တကူဝယ်ယူလို့ ရနေပြီနော် . . . ။
ဝယ်ယူလိုပါက » https://www.ict.com.mm/shop/softwares/operating-systems/
Computer, Microsoft, Operating System, Windows
Newer Screenshot ဖမ်းနည်း မျိုးစုံ
Older 32 bit နဲ့ 64 bit က ဘာတွေကွာတာလဲ?
ICT.com.mm မှာ Windows 10 လိုင်စင်ဗားရှင်းတွေကို ဝယ်ယူလို့ရပြီ
အခုနောက်ပိုင်း လက်ပ်တော့ တွေတိုင်းနီးပါးမှာ Windows 10 License Home Edition တွေပါဝင်လာကြတာကြောင့်Windows 10 user တွေပိုမိုများပြားလာပါတ...
Screenshot ဖမ်းနည်း မျိုးစုံ
ဖုန်းတွေမှာ Screenshot တွေကို အလွယ်တကူရိုက်လို့ရကြပေမယ့် PC တွေ၊ Laptop တွေမှာတော့ သိပ်မလွယ်သလို အရမ်းလဲမခက်ပါဘူး။ အက်ဒ်မင် ဒီနေ့မှာ P...
32 bit နဲ့ 64 bit က ဘာတွေကွာတာလဲ?
ကွန်ပျူတာ အသုံးပြုသူတွေ အနေနဲ့ Windows တင်တဲ့အခါ (သို့) ဆော့ဖ်ဝဲလ်တွဲ ဂိမ်းတွေကို download ဆွဲတဲ့အခါမှာ 32 bit Version နှင့် 64 bit Ver...
ဟိုလိုလန်းစ် (HoloLens)နဲ့ ပြန်လန်းတော့မယ့် Microsoft
Microsoftက Windows 10 Operating System အသစ် မိတ်ဆက်ပွဲမှာ အများ မျှော်လင့်ထားတဲ့ featuresများကို ပြန်လည်ထည့်သွင်းပြီး အခြား စိတ်ဝင်စားဖ...
Microsoftက နောက်လထဲမှာ The Simpsonsဇာတ်ကောင်များကို Minecraft ဂိမ်းမှာ ကစားနိုင်အောင် ဆောင်ကျဉ်း ပေးတော့မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ Homer, Marge, Ba...
Minecraftတီထွင်သူက Microsoftပိုက်ဆံနဲ့ ၀ယ်ယူလိုက်တဲ့ မော်ကွန်းတင်ထိုက်တဲ့ အိမ်ဂေဟာကြီးကို လေ့လာပါ
Minecraftကို တီထွင်သူ ဆွီဒင်လူမျိုး Markus Perssonက Beverly Hillsမှာ အံ့မခန်းတဲ့ အိမ်ဂေဟာကြီးကို ၀ယ်ယူလိုက် ပါတယ်။ အိပ်ခန်းရှစ်ခန်းပါတဲ...
Facebook က Microsoft ကို စွန့်ခွာ
၂၀၀၇ ခုနှစ်မှာ Microsoftက ရှယ်ယာ ၁.၆ ရာခိုင်နှုန်းအတွက် Facebook ထံမှာ ဒေါ်လာ ၂၄၀ သန်းရင်းနှီးမြှပ်နှံခဲ့ ပါတယ်။ Facebookရဲ့ တန်ဖိုးဟာလ...
Windows7အသုံးပြုသူတွေ အနေနဲ့အင်္ဂါနေ့တိုင်းမှာ အလိုအလျှောက် Updateပြုလုပ်ဖို့ သတ်မှတ်ထားတယ်ဆိုရင်တော့ အဲဒီသတ်မှတ်ထားမှုကို ပြင်ဆင်ဖို...
Microsoftက ၀င်းဒိုး ၈ ကို ပြောင်းလဲမလား
ရှင်းရှင်းပြောရရင်တော့ ၀င်းဒိုး ၈ မှာ အသုံးတည့်မှုများစွာ ပါရှိပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ကာလရှည်ကြာ ၀င်းဒိုး အသုံးပြုသူတွေကြားထဲမှာတော့ အဖွဲ့နှစ်...
Microsoftက လာမယ့် နှစ်ပတ်အတွင်း နောက်မျိုးဆက် ၀င်းဒိုးကို ပြသမည်
အထပ်ပါခေါင်းစီးက တရား၀င်ပါ။ Microsoftက စက်တင်ဘာလ ၃၀ ရက်နေ့မှာ ဆန်ဖရန်စစ္စကိုမှာ ပွဲတစ်ခုပြုလုပ်ပြီး ၀င်းဒိုးနောက်မျိုးဆက်ကို ပြသမယ်လို့...